Kupindura Chii Chinonzi Bitcoin Cash Uye Kubheja Kwemitambo Kubhadhara Mazano
Izvo zvinoitika zveBitcoin Cash (BCH) chimwe chinhu icho vatengesi vezvemitambo uye avo vari iwe kune cryptocurrency kubheja vangangosangana. Zvisinei, izvo zvavasingazive ndezvekuti zvine zvakawanda zvakafanana nemapiyona eiyo cryptocurrency. Ichi chinyorwa chinokupa kudzikira kwechiri chinonzi Bitcoin Cash pamwe nemabasa ayo.
Bitcoin Cash (BCH) yakasikwa pamusana pezvinhu zvakabatana nekutengesa kushandiswa, izvo zvinowanzotariswa kumashure ekukura kwebhokisi. Nokuti iyo Code Bitcoin haina kutungamirirwa nehurumende yepamusoro, kuchinja kumutemo kunoda kutenga-kubva kune vanogadzira nevatambi. Iyi nzira inogadziriswa inobvumirana inogona kuita kuti kushandiswa kwenguva refu kushandiswe. Somugumisiro, mapoka akaumba vatungamiri vavo vesimba pamwe nemitemo mitsva, inowanzozivikanwa seforogo. Mashokiti akawanda akamboitika mumakore apfuura asi akakundikana kugamuchirwa nevakawanda. Zvisinei, muna August 2017, Bitcoin Cash yakatorwa mushure meimwe fomu kubva kuBitcoin Classic.
Bitcoin Cash inoratidza
Basa reB Bitcoin Cash (BCH) nderokupa nzira yepamusoro yekubhadhara kune vezera kune vese vari pasi rose. Iine chinangwa chekutumira chekuita chekristptocurrency kubva pane zvakasiyana. Kuvandudza kukuru kunopiwa neBitcoin Cash ndiko kuwedzerwa kwemiganhu ye blocksize. Nekudaro, izvi zvinobvumira vanyori paketani yeBCH kuti vashandise kutengesa kumwe mune imwe nguva yakatarwa. Uyezve, iyo inouya zvakare ine mari inodhura, iyo ndiyo imwe yenhengo dzinokosha dzebhadharo yepamusoro.
Chimwe chezvinhu zvikuru zvinoshandiswa neBitcoin Cash ndezvokuti zvinogona kugadzirisa vashandisi vevashandi vekare. Kune avo vaigara vachitsvaka kuedza kupinza migodhi asi vanotyisirwa nemakambani makuru ane zvigadzirwa zviri nani, Bitcoin Cash inopa mikana inobatsira nekuda kwekukwikwidza kuduku.
Uyezve, chinangwa cheBCH ndechekuvandudza nhamba yekutengesa kunoshandiswa mukati mehuwandu hwenguva apo uchichengetedza unhu hunozivikanwa hweBitcoin. Tenga uye utengese Bitcoin Cash nekuzorora. Vatsigiri vanotenda kuti izvi zvinopa iyo kukwanisa kufanana nehuwandu hwekutengeserana kwakazadzikiswa nemitemo yekubhadhara tsika.
Bitcoin Cash senzira yekubhadhara
Zvechokwadi, kugovana maitiro akafanana neBitcoin kunoita Bitcoin Cash imwe nzira inobhadharwa yokubhadhara yekutengesa kusabhadhara kwemitambo yepamutambo yepamutambo. Izvo zviviri zvinogona kunyatsobatana, uye iwe haugone kufamba zvisina kunaka pamwe. Sezvakangoitika, iwe unosvika pakuwana muzvinyorwa zvose zveBitcoin apo iwe unoshandisa Bitcoin Cash ne Bitcoin Cash chikwama. Kana uchida chimwe chinhu chakasiyana asi chinoramba chiri chechokwadi kune cryptocurrency mantra, BCH ndiyo inotevera chinhu chakanaka.